अमेरिका हिड्नु भएका गच्छदारले हप्तादिन के गर्नुभयो दिल्लीमा ? | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » अमेरिका हिड्नु भएका गच्छदारले हप्तादिन के गर्नुभयो दिल्लीमा ?
अमेरिका हिड्नु भएका गच्छदारले हप्तादिन के गर्नुभयो दिल्लीमा ?
नेपालमा अन्तराष्ट्रिय खेल भइरहेको बेला नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता भारत र अमेरिकाको यात्रामा हिड्नु भएको छ । नेपाली राजनीतिका खेलाडी मानिएका उहाँ अन्तराष्ट्रिय चलखेल भन्दा परै बस्न रुचाउने नेता हुनुहुन्छ तर यसपटक उहाँ भारत हुँदै अमेरिका जानु भएको हो । नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको चलखेल बढी रहेको बेला उहाँ भारत हुँदै अमेरिका जानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ ।
असार १३ गते दिल्ली पुग्नुभएका गच्छदार त्यहाँ विभिन्न उच्चस्तरीय भेटघाटमा गरेर असार २० गते अमेरिकातिर लाग्नु भएको उहाँका नीजि सचिवालयले जनाएको छ । झापाको विर्तामोड हुँदै सिलिगुडी पुग्नुभएका गच्छदार भारतको वागडोरको एयरपोर्टबाट दिल्ली पुग्नुभएको थियो । उहाँ अमेरिका जानका लागि दिल्लीको रुट प्रयोग गर्नुभयो त्यो अर्थपूर्ण रहेको छ । दिल्ली हुँदै अमेरिका जानका लागि उहाँ त्यहाँ जानु भएको हो तर आठ दिनदेखि दिल्लीमा बस्नुभएको छ ।
आठदिनसम्म के गरिरहनु भएको छ यहाँ त्यसको चर्चा भइरहेको छ । दिल्ली स्रोतका अनुसार धर्मगुरु रवी शंकरमार्फत त्यहाँ उच्चस्तरीय भेटघाटमा लाग्नुभएको छ । उहाँ एउटा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि श्रीमतसहित दिल्ली पुग्नुभएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव यज्ञ चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भारत र अमेरिका भ्रमण गच्छदारको विल्कुल व्यक्तिगत भेटधघाट हो ।
तर स्रोत भन्छन्, व्यक्तिगत कामका लागि दिल्ली गएपनि उहाँ सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विभिन्न नेताहरुसँगको भेटघाटमा व्यस्त रहनु भएको छ । असार २२ गते अर्थात आइतवारदेखि काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने कुरा थियो तर त्यसमा पनि उहाँ सहभागी हुने गरि फर्किनु भएन । यद्यपी बैठक स्थगित भएको हो । एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उहाँ अमेरिका जानु भएको स्वकीय सचिव चौधरीले बताउनुभयो ।
गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमले काँग्रेससँग एकीकरण गरेपनि हालसम्म तल्लो तहसम्म पार्टी समायोजन भएको छैन । गच्छदारको पार्टीबाट काँग्रेसमा आएका कुनै पनि नेताहरुले जिम्मेवारी पाएको छैन । गच्छदारको साथमा आएका नेताहरु अलपत्र परेका छन् । आफ्ना नेताहरुको दवावका कारण प्रेसरमा रहेका गच्छदार पछिल्लो समय भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भएको छ । काँग्रेसको हुने भनिएका अगामी महाधिवेशनमा उहाँ पनि सभापतिाको उम्मेदवार हुने भनिएको छ र त्यसैको माहोल बनाउने शक्तिकेन्द्र देशहरुको भ्रमणमा जानु भएको हो ।